Maty Tamin’ny Fipoahana Baomba Tao Quetta, Mpanonofy Sy Ny Tsara Indrindra Tany Pakistana i Mehmood Khan · Global Voices teny Malagasy
Maty Tamin'ny Fipoahana Baomba Tao Quetta, Mpanonofy Sy Ny Tsara Indrindra Tany Pakistana i Mehmood Khan
Voadika ny 12 Aogositra 2016 2:45 GMT
Avy tao amin'ny pejy Facebook-n'i Mehmood. Sary avy amin'i Asmat Khan Asmat, mpakasary ao amin'ny Klioban'ny Mpanao Gazetin'i Quetta.
Ny herinandron'ny fitsingerenan'ny faha-26 taonan'i Mehmood, naratra ny fon'i Ali Shah, ary toy izany koa ny ahy.
Raha niresaka tamin'i Syed Ali Shah aho, namako sy mpiara-niasa tamiko fahiny tao amin'ny fantsna fahitalavitra Pakistane, DawnNews, ny alina teo, dia hoy izy: “nandao ity tany ity i Mehmood ary nentiny niaraka aminy ireo nofinofiny.”
Maty tamin'ny fipoahana baomba tao amin'ny hopitaly tao Quetta ny Alatsinainy 8 Aogositra, roa andro nialoha ny tsingerintaonany, i Mehmood Khan, mpakasarin'ny DawnNews. Fahaverezana goavana io. Maneho ny tsara indrindra ao Pakistana sy ny media Pakistane i Mehmood, media izay indostria nanampy azy hivoatra avy tamin'ny naha-mpiambina ho lasa mpiasa mpahay teknolojia-n'media ampy traikefa tao anatin'ny fito taona.
Manana kilema maro ny indostrian'ny media, fa kosa iray amin'ireo toerana vitsy any Pakistana izay manana fitondra nahazatra hatrizay amin'ny fifampitsinjovan'ny tsirairay, tsy miankina amin'ny fiaviana sy fitaizàna. Samy mifampitsinjo ny tsirairay. Raha mbola vonona ny hianatra ianao, io no toerana afaka hitomboanao ao anatin'ny fikirizana mafy sy fitiavana madio.
Niroborobo tao anatin'ny media Pakistane i Mehmood, ary nanampy azy sy nanohana azy tamin'ny làlany rehetra i Ali Shah.
Fony aho niala tao amin'ny DawnNews enin-taona lasa izay, niezaka ny nampiditra an'i Mehmood Khan ho mpamoaka lahatsary tao amin'ny ekipan'ny birao ny Lehiben'ny Biraon'ny DawnNews Quetta, Ali Shah. Tamin'ireo antsoko farany mikasika ny vaovao niaraka tamin'i Ali Shah, nangataka ahy hanao teny tsara ho an'i Mehmood izy.
Mehmood Khan miaraka amin'ireo mpiara-miasa, voahodidin'ireo fiara mpandefa vaovao avy amin'ireo tambajotram-baovao maro any Pakistana.
Nandeha tamin'ny vintana tsotra izao no nidiran'i Mehmood tamin'ny biraonay ao Quetta. Orinasa tsy miankina misahana fiambenana no nandefa azy tao. Tanora izy, tao anatin'ny fiafaran'ny adolantsetony, ary efa miahy ankohonana kely sahady. Nanana gazety foana izy teny an-tànany, ary liana tamin'ny momba azy ny ekipan'ny biraon'ny DawnNews. Nahaliana an'i Mehmood ny tontolon'ny media.
Namporisika ny fitiavany te-hahafantatra zavatra ireo mpiara-niasa taminy toa an'i Ali Shah sy ny mpitatitra vaovaonay any Quetta, Amjad Hussain. Nila azy ihany koa izy ireo. Rehefa mipoaka ny vaovao, ampiasainao daholo ireo olona rehetra manodidina anao, ary toy ny fivarotana kely ny birao any Quetta. Misy fotoana, ny mpitatitra vaovao no mpakasary sy mpamoka lahatsary. Indraindray ny mpamily no mpakasary. Ary indray andro, Mehmood, ilay mpiambina, nitsambikina hanampy ny mpitatitra vaovao hanao ny lahatsary.
Mehmood Khan miaraka amin'i Ali Shah eo afovoany ary mpiara-miasa iray hafa ao amn'ny DawnNews, Zubair Ali Khilji (havanana mankany amin'ny havia) tao amin'ny biraon'ny Quetta DawnNews. Avy ao amin'ny pejy Facebook-n'i Mehmood.
Tao anatin'ny volana maromaro, nijanona izy rehefa vita ny anjara asa fiambenany ary nanao fanapatapahana ampahana lahatsary tsotra tao anatin'ny hafainganana nilaina tamin'ireo 24/7 nandreraka. Ny fialàn'i Mehmood amin'ny maha-mpiambina azy no hitan'i Ali Shah ho zavatra mety indrindra, ary nampiditra azy ho toy ny mpanao lahatsarim-baovao ny DawnNews. Nila azy izy ireo.
Mehmood mamoaka ho an'ny biraon'ny DawnNews Quetta. Avy amin'ny pejy Facebook-n'i Mehmood.
Tsy ela dia lasa tao anatin'ny ekipan'ny mpanao vaovao izy, saingy mbola nanohy nianatra sy naka traikefa vaovao hatrany. Roa taona lasa izay, nampiakarina ho mpaka lahatsary izy. Niriany ny ho ao. Ny ho mpitatitra vaovao no nofinofiny, nanangona izy mba hanaovany ny Masters-ny amin'ny “Communications de Masse” (Serasera ho an'ny Daholobe).
Namoaka ny naha izy azy isaky ny ambaratongan'ny làlana nodiaviny i Mehmood. Nianatra ny zavatra rehetra hainy mikasika ny “Final Cut Pro” sy ny famoahana lahatsary izy, satria nampiseho fitia te-hahalala zavatra sy fahavononana ny hanampy izy, ary ho valin'izay, nampianatra azy ny zavatra hainy ireo mpiara-niasa taminy tao amin'ny DawnNews ary namporisika azy hianatra. Fa tsy naheno iray tamin'ireo mpiara-niasa taminy naka ny lazany mihitsy ianao. Milaza izy ireo fa mpanonofy izy ary nizotra tamin'ny làlany manokana.
Niezaka ny hanatsara kokoa ny tenany sy hisondrotra hatrany i Mehmood. Izany rehetra izany raha sady miantsoroka ireo zanany fito izy, ka telo amin'ireo no natsangany taorian'ny loza nanjo fianakaviana iray.
Mehmood no tsara indrindra taminay. Mehmood no tsara indrindra tamin'i Pakistana.
Mpitantana ny famoahana ato amin'ny Global Voices ary miaina any San Francisco Bay Area i Sahar Habib Ghazi . Niasa ho mpanao gazety mpamoaka vaovao tany Pakistana izy nanomboka ny taona 2005-2010.
4 andro izaySri Lanka
1 herinandro izaySri Lanka
Indiana mpikatroka mamoaka ny gazetiboky antserasera voalohany amin'ny fiteny Santali